အမျိုးသမီးများအတွက် Plus Size Zipper PU သားရေအနက်ရောင်ရှပ်ဒီဇိုင်းဘောင်းဘီရှည် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက် Plus Size Zipper PU သားရေအနက်ရောင် Jumpsuit
$77.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $96.99
အရွယ် 6XL 5XL 4XL XXXL 7XL S XXL XL L M
Black က / 6XL Black က / 5XL Black က / 4XL Black က / XXXL Black က / 7XL Black က / S က Black က / XXL Black က / XL Black က / L ကို Black က / M က
အမျိုးသမီး ၀ တ်အရွယ်အစား Zipper PU သားရေအနက်ရောင် Jumpsuit - အနက်ရောင် / 6XL backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Jumpsuits & Rompers
အရွယ် တွေဆီကနေ ခါး တင်ပါး ပခုံး အင်္ကျီလက် အရှည်
မှတ်ချက် - ကျေးဇူးပြု၍ အရွယ်အစားဇယားအတိုင်းလိုက်နာပါ။ အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏အလေ့အထအရတိုက်ရိုက်မရွေးချယ်ပါနှင့်။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့်အရွယ်အစားမှာ ၂ မှ ၃ စင်တီမီတာခြား။ ရှိသည်။ သင်တိုင်းတာသည့်အခါသတိပြုပါ
အလို!! ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအအရည်အသွေး, အသေးစိတ်အံ့သြဖွယ်များမှာ !! အလွန်ကျေနပ် !!
အဆိုပါ jumpsuit topping-out နှစ်သက်ကြဘူး
အရည်အသွေးကောင်း။ အထူပစ္စည်း။ ကျွန်ုပ်သည် US6အရွယ်နှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားအရွယ်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကြိုက်တယ်! ရုပ်ပုံနှင့်အတူတူပင်။ ငါကြီးလာမှာကြောက်တယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁.၆၀ အလေးချိန် ၅၂ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီးအများအားဖြင့်တော့အရွယ်အစား s ။ ဒါဟာအနည်းငယ်ဒြပ်ရနံ့, လေးနက်ဘာမှရှိပါတယ်။ မင်းအတွက်အိတ်ကပ်တွေအများကြီးရှိတာဝမ်းသာတယ် အတိအကျရောက်ရန်ရက်ပေါင်း ၂၀ ကြာခဲ့သည်။
၀ တ်စုံသည်အလွန်သပ်ရပ်လှပသော၊ အရာအားလုံးကိုလှပစွာချုပ်ထားသည်၊ အရည်အသွေးကောင်းသည့်အကျီင်္များ၊ ဓာတ်ပုံနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, ပိုပြီးအရွယ်အစားအပေါ်ကိုယူ! ယူပါ၊ သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်၊ အေးမြသောရာသီဥတုတွင်အလွန်ကောင်းသည်၊ 2200 အတွက်အကောင်းတစ် ဦး လျှော့စျေးနှင့်အတူယူ! အရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။